Sony Xperia အမျိုးအစားဖုန်းများကို အလွယ်ဆုံး root လုပ်နည်းနှင့် မြန်မာစာ font ထည့်သွင်းနည်း ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Monday, January 16, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်9comments
9 February 2012 at 00:28 Reply
အစ်ကို ကျွန်တော် root လုပ်တာ ဖုန်းက ပါဝါပြန်ဖွင့်ရင် shut down ပြန်ပြန်ကျသွားတယ်ဗျ ဖုန်းအမျိုးအစားက sony ericssion Xperia x10 ပါ ဘယ်လို လုပ်၇မလဲ မသိလို့ ဖြစ်နိုင်ရင် အကြံပေး အကြောင်းပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။
23 March 2012 at 23:33 Reply
အစ်ကိုမြန်မာစာရေလိုဘူ ဖုန်းအမျိးအစားက sony ericsson xperia x8
31 March 2012 at 03:01 Reply
don't try fri my ph is x8 also.u can't do anything........
thit khet says:
25 April 2012 at 00:24 Reply
root လုပ်တာလည်းမရဘူး.. ကျမ ဖုန်းက xperia x8 ...ဘာလို့လဲမသိဘူးရှင့် ...ကူညီနိုင်ရင်ကူညီပါဦးနော် ....
3 May 2012 at 01:11 Reply
ကိုဝင်း ရေ ကျနော့် ဖုန်း က Sony Ericsson live with walkman wt 19i ပါ
Andriod Version က 2.3.4 ပါ။
Build Number က 4.0.2.A.0.62 ပါ။သူ့ ကို မြန်မာဖောင့် ထည့် ချင်လို့ ဒီပို့ ကအတိုင်း လုပ်တာ
အဆင်မပြေဘူး ခင်ဗျ။Super User ကတော့ ရပြီး Root Explor ကိုဝင် တော့ ဘာ request မှ မတောင်းဘူးခင်ဗျ။မြန်မာဖောင့် ကီးဘုတ် ကတော့ ရတယ်ဗျ။ဒါပေမယ့် မြန်မာလို မမြင်ရဘူး။
အတုံးလေး တွေ ပဲ ပေါ်နေတယ် ဗျ။အဲဒါ ဘယ်လို လုပ်ရ မလဲ ဗျ။။ ကူညီ ပါဦး.
ကျနော့် မေးလ် က sept.siansian@gmail.com ပါ ။
4 May 2012 at 20:21 Reply
ဟိုင်း အစ်ကို....ကျွန်တော့ဖုန်းက sony ericsson xperia / mordal st18i ပါ....မြန်မာဖောင့် မမြင်ရဘူးဖြစ်နေလို့...ကူညီပေးပါဦးနော်....
ကျွန်တော့ gmail က laypyay.lpp@gmail.com ပါ.....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...
30 May 2012 at 16:36 Reply
thanks you so much brother, i was downloaded software from ur site always and i m from singapore. i m electrical engineer i was read ur blog frequently and whever software i need i browse to ur blog and get it, i was always thank to you in my heart but i never wrote in comment,just i saw in ur post that "Dont forget to say thank". so sorry for ignoreing to said thank,always thanks from my heart brother
22 August 2012 at 01:25 Reply
အစ်ကိုရေ sony ericsson xperia sk17 i အတွက်မြန်မာဖောင့်လေး တင်ပေးပါဦး ........
myominoo oo says:
15 February 2013 at 11:07 Reply
အစ်ကို ကျွန်တော်ဖုန်းမြန်မာစာမပေါ့လိုဘယ်လို့လုပ်ရမှာလဲ့ ဖနြ်းအမိူစာက i-mobile
Bigasoft iPhone Ringtone Maker v1.6.6.3600 + Keyge...
Xilisoft iPhone Ringtone Maker v3.0.4.1206 ( Porta...
Internet Download Manager v6.08 Build9( Portabl...
Creating iTunes Account without Credit Card (iTu...
Windows OS ပေါ်တွင် iPhone 4S နှင့် iPad2အား GUI ...
Chrome Browser မှာ မြန်မာလို ဖတ် လို့ရအောင်
Sony Ericsson xperia များကို root, font, keyboard ...
Internet Download Manager v6.08.8 FiNAL (17 , Jan ...
Window7Autorun Disabler 2.0
Maxthon browser မှာ မြန်မာလို ရေးလို့ ဖတ်လို့ ရအေ...
Free Partition Software - MiniTool Partition Wizar...
Speed Connect Internet Accelerator 8.0 ( Just Doub...
Access Denied ကျော်ခွနည်းများ
Keylogger Detector 1.33 Portable
Window7 Background Changer
Hiren Boot USB 10
ဆော့ဝဲလ် ပေါင်း 250 ကျော်
Adobe photoshop cs 1, cs 2, cs 3, cs 4, cs5prota...
AutoCAD 2012 (32bit & 64bit)
fake remover 1.83 Update
91 PC Suit For iPhone & Android phone
Internet Download Manager v6.07 Build 16 Final ( ဘ...
Kingsoft PC Doctor 3.3 Version
Clean My PC Registry Cleaner 4.41 full
HJSplit (ဖိုင် ခွဲ + ဆက်)
Norton Internet Security 2012 + 50 years (နှစ် ၅၀...
NOKIA Mobile Phone တွေ Locked ကျသွားခဲ့ရင်
အသုံးဝင် Software ပေါင်းစုံ
Internet Download Manager 6.08 Build7Beta (29 De...